အညတရမှ အထင်ကရသို့ – Gentleman Magazine
သေဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင် သင့်နာမည်ကို လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့စိတ်ထဲမှာ အမှတ်တရဖြစ်ကျန်နေခဲ့စေချင်ပါသလား
အားလုံး ဒီလိုဖြစ်ချင်ကြမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအနေအထားအရ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာက လူနည်းစုပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့လူအများစုက သာမန်အညတရဘ၀နဲ့ပဲ တစ်သက်လုံး ဖြတ်သန်းသွားမှာပါ။
သင့်အနေနဲ့ သာမင်ညောင်ည အညတရဘ၀က အထင်ကရတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး လုပ်ရမယ့်အလုပ်က စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀ကို အနိုင်လိုချင်ရင်၊ အမှန်တကယ် အနိုင်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကြယ်တွေဆီကိုလည်း ရောက်အောင် သွားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးရှိဖို့ လိုပါတယ်။ သင့် စိတ်ကူးအိပ်မက်က သေးငယ်နေမယ်ဆိုရင် အောင်နိုင်မှုကလည်း သေးငယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးအိပ်မက်ကြီးကြီးမရှိပဲ ဘ၀အောင်မြင်ကြီးကြီးမားမားလည်း ရှိလာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ တတ်နိုင်သလောက် အကြီးဆုံး စိတ်ကူးကို မယဉ်နိုင်ရတာလဲ။
အဆုံးသတ်မှာ အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့ ဘ၀မျိုးမှာပဲ နေချင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ နေချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ စိတ်ကို လမ်းဖွင့်မပေးနိုင်ရတာလဲ။ အောင်မြင်မှုနဲ့ ထိုက်တန်ရဲ့သားနဲ့ ဘာကြောင့် နောင်တတွေနဲ့ ဘ၀ကို ကုန်ဆုံးချင်ရတာလဲ။
အောင်နိုင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အားလုံးကို ငုံ့ကြည့်နိုင်ဖို့က အမြင့်ဆုံးကို ရောက်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အကြီးကြီးတွေးပါ။ သာမန်ဘ၀ကနေ ရုန်းထွက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့ သာမန်ဘ၀မှာပဲ ရပ်တန့်နေရတာလဲ။ ရိုးရိုးလေးပါ။ သင့်စိတ်ရဲ့အတိမ်အနက်ကို တိုးချဲ့ပါ။ သေးသေးလေးတွေ တွေးမနေပါနဲ့တော့။ သင့်ရဲ့ စိတ်ကို ကောင်းကင်ထိမြှင့်တင်ထားပြီး မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအထိ ဖြန့်ကျက်ထားလိုက်ပါ။
Apple ရဲ့ တည်ထောင်သူ Steve Jobs လုပ်ငန်းစတင်ချိန်က အခြားသူတွေလို သာမန်လောက်ပဲ စိတ်ကူးရှိမယ်လို့ ထင်ပါသလား။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
သူက အညတရနေရာမှာ ရပ်မနေပါဘူး။ သူက အကြီးကြီးတွေ အိပ်မက်ခဲ့ရုံသာမကပါဘူး။ သူ့အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အချိန်ကိုပါ ယူခဲ့ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ သူ့စိတ်ကို အလဟဿအဖြစ်မခံပါဘူး။
အခြားသူတွေအားလုံးက လက်ရှိမျှခြေကိုပဲ ထိန်းသိမ်းဖို့ အာရုံစိုက်နေချိန်မှာ Steve Jobs က လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲတိုးတက်သွားအောင် စိတ်ကူးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့သာ ကြီးမားဆန်းပြားတာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်မရှိခဲ့ရင် အခြားသူတွေလိုပဲ မထင်မရှားနဲ့ ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကိုယ်သူ ထူးခြားတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်ကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးချပြီး သူလိုချင်ခဲ့တဲ့ အရာကို ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀ရဲ့ကစားပွဲကို မစတင်ခင်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ကစားမှာလဲဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။ သင် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ထားသလောက်ပဲ စွမ်းအောင်အောင်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အိပ်မက်တွေက အကန့်အသတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ကူးအိပ်မက် သေးသေးလေးပဲ ရှိမယ်ဆိုရင် သင်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်း သေးငယ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တကယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တာရဲ့ ထက်ဝက်လောက်ပဲ အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ကူးအိပ်မက် ကြီးကြီးထားပါ။
သင့် စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို သင်ကိုယ်တိုင်တောင် မယုံနိုင်အောင်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် လုံလောက်အောင် မကြီးမားသေးပါဘူး။ ဒီစိတ်ကူးအိပ်မက်ကို တစ်နေ့မှာဖြစ်မြောက်လာအောင် လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုပြီး သင်ကိုယ်တိုင်က ကြောက်လန့်နေတဲ့အထိ တွေးပစ်လိုက်ပါ။
ဒီအချက်က အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘ၀ကို စိတ်ကူးအိပ်မက်ပေါ်မှာ အခြေခံတည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀ရဲ့ အရေးကိစ္စတွေသာမက ဘ၀ရဲ့အရည်အသွေးကိုပါ တည်ဆောက်ရမှာပါ။ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကြီးကြီးထားပြီး အထင်ကရ ဘ၀မှာ နေမလား၊ ခပ်သေးသေးပဲ စိတ်ကူးပြီး သာမန် အညတရဘ၀မှာပဲနေမလားဆိုတာက သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
တကယ်လို့များ သင့်အတွက် အောင်မြင်မှုက သေချာပြီး ကျရှုံးဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင် သင် ဘာလုပ်မလဲ ???
ဒီမေးခွန်းအတွက် သင့်ရဲ့အဖြေက သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းကို နားလည်အောင်ပြန်ဖတ်ပါ။ ပြန်ဖြေကြည့်ပါဦး။
သင့်အနေနဲ့ အဆုံးသတ်လှစေချင်ရင် အစကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်က သင်ကိုယ်တိုင် အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မိသားစု သူငယ်ချင်း စတဲ့အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်နေလို့ မရပါဘူး။ အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေရုံနဲ့ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုကို မရနိုင်ပါဘူး။ Martin Luther King ကနေ Leonardo Da Vinci အထိ အထင်ကရဖြစ်ခဲ့သူတိုင်းက ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်တွေနောက်ကို လိုက်ခဲ့ကြသူတွေချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့်နှစ်မှာ သင့်အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ ?
သင့်ရဲ့ နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက်၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေက ဘာတွေလဲ ?
အားလုံးကို စာရွက်တစ်ရွက်မှာ ချရေးထားလိုက်ပါ။
အိပ်ရာမ၀င်ခင်နဲ့ မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာထချိန်တိုင်းမှာ ဖတ်ပါ။ ကြိုးစားပါ။ အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ လက်တကမ်းမှာရှိပါတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ သမိုင်းတစိတ်တဒေသဖြစ်နေမယ့် သာမန် အညတရဘ၀ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အထင်ကရသမိုင်းတစ်ခုကို ရေးထိုးလိုက်ပါ။
သဆေုံးသှားသညျ့တိုငျအောငျ သငျ့နာမညျကို လူသနျးပေါငျးမြားစှာရဲ့စိတျထဲမှာ အမှတျတရဖွဈကနျြနခေဲ့စခေငျြပါသလား
အားလုံး ဒီလိုဖွဈခငျြကွမှာ သခြောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိအနအေထားအရ ဒီလိုဖွဈလာဖို့ဆိုတာက လူနညျးစုပဲ ရှိပါတယျ။ ကနျြတဲ့လူအမြားစုက သာမနျအညတရဘဝနဲ့ပဲ တဈသကျလုံး ဖွတျသနျးသှားမှာပါ။
သငျ့အနနေဲ့ သာမငျညောငျည အညတရဘဝက အထငျကရတဈယောကျဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ ပထမဆုံး လုပျရမယျ့အလုပျက စိတျကူးယဉျဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘဝကို အနိုငျလိုခငျြရငျ၊ အမှနျတကယျ အနိုငျလိုခငျြတယျဆိုရငျ ကွယျတှဆေီကိုလညျး ရောကျအောငျ သှားမယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုးရှိဖို့ လိုပါတယျ။ သငျ့ စိတျကူးအိပျမကျက သေးငယျနမေယျဆိုရငျ အောငျနိုငျမှုကလညျး သေးငယျနမှောဖွဈပါတယျ။
စိတျကူးအိပျမကျကွီးကွီးမရှိပဲ ဘဝအောငျမွငျကွီးကွီးမားမားလညျး ရှိလာမှမဟုတျပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့ တတျနိုငျသလောကျ အကွီးဆုံး စိတျကူးကို မယဉျနိုငျရတာလဲ။
အဆုံးသတျမှာ အောငျမွငျမှုမရှိတဲ့ ဘဝမြိုးမှာပဲ နခေငျြပါသလား။
မဟုတျပါဘူး။ နခေငျြမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါဆိုရငျ ဘာဖွဈလို့ ဖွဈခငျြတာတှကေို ဖွဈအောငျလုပျဖို့ စိတျကို လမျးဖှငျ့မပေးနိုငျရတာလဲ။ အောငျမွငျမှုနဲ့ ထိုကျတနျရဲ့သားနဲ့ ဘာကွောငျ့ နောငျတတှနေဲ့ ဘဝကို ကုနျဆုံးခငျြရတာလဲ။
အောငျနိုငျသူတဈယောကျအနနေဲ့ အားလုံးကို ငုံ့ကွညျ့နိုငျဖို့က အမွငျ့ဆုံးကို ရောကျနဖေို့ လိုပါတယျ။ အကွီးကွီးတှေးပါ။ သာမနျဘဝကနေ ရုနျးထှကျပါ။ ဘာဖွဈလို့ သာမနျဘဝမှာပဲ ရပျတနျ့နရေတာလဲ။ ရိုးရိုးလေးပါ။ သငျ့စိတျရဲ့အတိမျအနကျကို တိုးခြဲ့ပါ။ သေးသေးလေးတှေ တှေးမနပေါနဲ့တော့။ သငျ့ရဲ့ စိတျကို ကောငျးကငျထိမွှငျ့တငျထားပွီး မိုးကုပျစကျဝိုငျးအထိ ဖွနျ့ကကျြထားလိုကျပါ။
Apple ရဲ့ တညျထောငျသူ Steve Jobs လုပျငနျးစတငျခြိနျက အခွားသူတှလေို သာမနျလောကျပဲ စိတျကူးရှိမယျလို့ ထငျပါသလား။ လုံးဝမဟုတျပါဘူး။
သူက အညတရနရောမှာ ရပျမနပေါဘူး။ သူက အကွီးကွီးတှေ အိပျမကျခဲ့ရုံသာမကပါဘူး။ သူ့အိပျမကျကို အကောငျအထညျဖျောဖို့ အခြိနျကိုပါ ယူခဲ့ပါတယျ။ နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာတှနေဲ့ သူ့စိတျကို အလဟဿအဖွဈမခံပါဘူး။
အခွားသူတှအေားလုံးက လကျရှိမြှခွကေိုပဲ ထိနျးသိမျးဖို့ အာရုံစိုကျနခြေိနျမှာ Steve Jobs က လုပျငနျးနယျပယျတဈခုလုံးကို ပွောငျးလဲတိုးတကျသှားအောငျ စိတျကူးလုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့သာ ကွီးမားဆနျးပွားတာတဈခုကို လုပျဆောငျဖို့ ရညျမှနျးခကျြမရှိခဲ့ရငျ အခွားသူတှလေိုပဲ မထငျမရှားနဲ့ ပွီးဆုံးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
သူ့ကိုယျသူ ထူးခွားတယျဆိုတာကို သိခဲ့ပါတယျ။ ဒီခံစားခကျြကို လောငျစာအဖွဈအသုံးခပြွီး သူလိုခငျြခဲ့တဲ့ အရာကို ရယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဘဝရဲ့ကစားပှဲကို မစတငျခငျမှာ ဘယျလောကျအထိ ကစားမှာလဲဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယျ။ သငျ စှမျးဆောငျနိုငျမယျလို့ ထငျထားသလောကျပဲ စှမျးအောငျအောငျမွငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
သငျအိပျမကျတှကေ အကနျ့အသတျဖွဈနပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျကူးအိပျမကျ သေးသေးလေးပဲ ရှိမယျဆိုရငျ သငျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကလညျး သေးငယျနမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ တကယျစှမျးဆောငျနိုငျတာရဲ့ ထကျဝကျလောကျပဲ အောငျမွငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တတျနိုငျသမြှ စိတျကူးအိပျမကျ ကွီးကွီးထားပါ။
သငျ့ စိတျကူးအိပျမကျကို သငျကိုယျတိုငျတောငျ မယုံနိုငျအောငျမဖွဈသေးဘူးဆိုရငျ လုံလောကျအောငျ မကွီးမားသေးပါဘူး။ ဒီစိတျကူးအိပျမကျကို တဈနမှေ့ာဖွဈမွောကျလာအောငျ လုပျနိုငျပါ့မလားဆိုပွီး သငျကိုယျတိုငျက ကွောကျလနျ့နတေဲ့အထိ တှေးပဈလိုကျပါ။
ဒီအခကျြက အခွခေံဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ဘဝကို စိတျကူးအိပျမကျပျေါမှာ အခွခေံတညျဆောကျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘဝရဲ့ အရေးကိစ်စတှသောမက ဘဝရဲ့အရညျအသှေးကိုပါ တညျဆောကျရမှာပါ။ စိတျကူးအိပျမကျကွီးကွီးထားပွီး အထငျကရ ဘဝမှာ နမေလား၊ ခပျသေးသေးပဲ စိတျကူးပွီး သာမနျ အညတရဘဝမှာပဲနမေလားဆိုတာက သငျ့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုပါပဲ။
တကယျလို့မြား သငျ့အတှကျ အောငျမွငျမှုက သခြောပွီး ကရြှုံးဖို့အကွောငျးမရှိဘူးဆိုရငျ သငျ ဘာလုပျမလဲ ???
ဒီမေးခှနျးအတှကျ သငျ့ရဲ့အဖွကေ သငျ့စိတျကူးအိပျမကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ မေးခှနျးကို နားလညျအောငျပွနျဖတျပါ။ ပွနျဖွကွေညျ့ပါဦး။
သငျ့အနနေဲ့ အဆုံးသတျလှစခေငျြရငျ အစကောငျးဖို့လိုပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ စိတျကူးအိပျမကျက သငျကိုယျတိုငျ အမှနျတကယျလိုခငျြတဲ့အရာဖွဈဖို့ လိုပါတယျ။ မိသားစု သူငယျခငျြး စတဲ့အခွားတဈယောကျယောကျရဲ့ အိပျမကျဖွဈနလေို့ မရပါဘူး။ အခွားလူတဈယောကျရဲ့ အိပျမကျကို အကောငျအထညျဖျောနရေုံနဲ့ အကွီးအကယျြအောငျမွငျမှုကို မရနိုငျပါဘူး။ Martin Luther King ကနေ Leonardo Da Vinci အထိ အထငျကရဖွဈခဲ့သူတိုငျးက ကိုယျပိုငျအိပျမကျတှနေောကျကို လိုကျခဲ့ကွသူတှခေညျြးပဲ ဖွဈပါတယျ။
လာမယျ့နှဈမှာ သငျ့အလိုခငျြဆုံးအရာက ဘာလဲ ?
သငျ့ရဲ့ နောကျဆုံး ရညျမှနျးခကျြ၊ စိတျကူးအိပျမကျတှကေ ဘာတှလေဲ ?
အားလုံးကို စာရှကျတဈရှကျမှာ ခရြေးထားလိုကျပါ။
အိပျရာမဝငျခငျနဲ့ မနကျမိုးလငျး အိပျရာထခြိနျတိုငျးမှာ ဖတျပါ။ ကွိုးစားပါ။ အကောငျအထညျဖျောပါ။ အောငျမွငျမှုဆိုတာ လကျတကမျးမှာရှိပါတယျ။ အခွားလူတဈယောကျရဲ့ သမိုငျးတစိတျတဒသေဖွဈနမေယျ့ သာမနျ အညတရဘဝကနေ ရုနျးထှကျပွီး ကိုယျပိုငျအထငျကရသမိုငျးတဈခုကို ရေးထိုးလိုကျပါ။
Previous: သုညနဲ့ စတင်ခဲ့ကြသူများ
Next: တစ်နေ့တာရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အချိန်